Fifidianana Ben’ny tanana :: Feno kandidà ihany ireo kaominina dimy amby sivifolo sy eninjato sy arivo • AoRaha
Feno tamin’ny ora farany. Nampahafantarin’ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), omaly hariva, fa samy ahitana kandidà ben’ny tanàna handray anjara amin’ny fifidianana, hatao amin’ny 27 novambra ho avy izao, avokoa ireo kaominina miisa manerana ny Nosy.
Iraika amby enimpolo sy enina arivo ireo kandidà ben’ny tanàna. Valo amby dimapolo sy dimanjato sy efatra arivo kosa ireo kandidà mpanolotsaina, saingy misy kaominina roa tsy manana kandidà, any Antsangatsanga sy any Amparihintsokatra samy ao amin’ny distrikan’Ambatondrazaka.
“Maro loatra ireo olom-pirenena niaraka tonga tamin’ny ora farany rehefa nanatitra ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiany tany amin’ny Rafitra misahana ny fanaraha-maso ny firotsahan-kofidiana isaky ny distrika (Ovec). Niteraka fahatarana teo amin’ny firaketana ny anaran’izy ireo izany. Voatery niasa mandra-maraina ny mpiasan’ny Ovec mba nanatrarana ny fahatarana ary taorian’ny fahavitan’ny asa vao nampitaina taty amin’ny Ceni foibe ireo antontan’isa vonjimaika ireo”, hoy Rakotondrazaka Fano, mpampaka-tenin’ny Ceni, omaly hariva.
Tarehimarika vonjimaika ihany ireo navoaka ireo satria mbola hanamarina an’ireo antontan-taratasy filatsahan-kofidiana ben’ny tanàna sy mpanolotsaina ny Ovec, ao anatin’ny 78 ora. Azo heverina ny hisiana kaominina tsy hanana kandidà raha sanatria holavin’ny Ovec ny taratasy filatsahan’ireo olom-pirenena sasany tsy nahafeno fepetra.
“Raha izay no hitranga dia anjaran’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana no miantso ny minisiteran’ny Atitany mba hanatanterahana fifidianana amin’ny ampahany any amin’ireo kaominina tsy manana kandidà ireo. Roapolo amby zato andro aorian’ny fangatahana avy eo, no tokony hanaovana ny fifidianana amin’ny ampahany”, hoy hatrany ny mpampaka-tenin’ny Ceni, Rakotondrazaka Fano.
Tsiahivina fa amin’ny 15 septambra no hamoaka amin’ny fomba ôfisialy ny tena isan’ireo kandidà sady hanao ny an-tsapaka ny laharan’izy ireo ao anaty biletà tokana ny Ceni.
Lalàna mifehy ny serasera Naverin’ireo depiote ilay andininy momba ny famoahana vaovao tsy ofisialy
Ady amin’ny kolikoly :: Handefa mpanara-maso an’ireo fonja sy lapan’ny Fitsarana ny fanjakana